Uphahla lweKhabhine yeOasis - I-Airbnb
Uphahla lweKhabhine yeOasis
Igumbi lakho lokulala e inqugwala sinombuki zindwendwe onguKatja
Ikhabhathi entle eluphahleni eyenziwe nge-bamboo plywood ehlala ihleli kwindawo eluhlaza yezityalo ezishinyeneyo ezishinyeneyo kwindawo yokuhlala ezolileyo ngaphandle kwesixeko saseKannur. Relaxa, incoko, okanye ufunde incwadi kwithafa eluphahleni oluphangaleleyo, okanye ubambe imithambo yeyoga kunye nokucamngca.
Ithafa yethu eluphahleni ilula kwaye iphangalele, kwaye inomoya wayo osemva, igadi ephezu kophahla, iindawo zokuhlala ezimbini, kunye nendawo eninzi evulekileyo yemisebenzi. Yindawo yokuhlanganisana, ukuphumla, ukufunda incwadi, ukubukela iintaka, ukumamela izandi zendalo, ukulamla, ukudanisa, okanye ukuzilolonga (ukuba uziva uthanda ngolo hlobo).
Ngelixa kusenokufuneka ukuba ngamaxesha athile wabelane ngesithuba sophahla oluvulekileyo neendwendwe ezihlala kwigumbi leGreen Dreams Oasis elingezantsi okanye umamkeli wakho, yeyakho ixesha elininzi. Umamkeli wakho kunye nenja yakhe enobubele i-Snowflake bahlala kumgangatho ophakathi ongezantsi, apho elinye igumbi leendwendwe elidweliswe njengeGreen Dreams Oasis liyafumaneka.
Ikhabhathi eluphahleni inomnyango wabucala kwaye uya kuba nesitshixo socango lwegrill engezantsi, ukuze ukwazi ukuza kwaye uhambe njengoko uthanda ngaphandle kokudlula kwindlu enkulu. Umamkeli wakho ngovuyo ukwenzela iti kwaye akunikeze namanzi okusela, kwaye ukuhlala ixesha elide wamkelekile ukuba usebenzise ikhitshi elingezantsi. Wamkelekile ukuba uzipholele kwigumbi lokuhlala kwikhaya lomamkeli, naye, nincokole, nidlale ne-Snowflake, okanye niziphole nje.
Ubumelwane buchumile, buluhlaza, kwaye buzolile kwaye buyamangalisa kuhambo olude okanye olufutshane okanye ukubaleka, umzekelo ukuya kumhlaba omanzi okufutshane onebhulorho enomjelo obukekayo. Indlu yethu ibekwe kwisitalato esingenasiphelo, akukho zitraffic. Kuhlala kukhululeka ukubuyela ekhaya emva kohambo oluya kumbindi wedolophu yaseKannur, ekumgama we-10min ukuya. Kumalunga ne-4km ukuya kulwandle oludumileyo lwePayyambalam kunye nokuhamba nge-20min ukuya kumanzi angasemva eKannur. Iivenkile ezithengisa ukutya kunye nendawo yokutyela encinci yasekuhlaleni enika iti, isidlo sakusasa, kunye nesidlo sasemini zikufuphi nje.
Ababuki zindwendwe bakho, uRanjit waseKannur kunye nenkosikazi yakhe yaseJamani uKatja bahlala ngezantsi nje kumgangatho ophakathi, kwaye bafumaneka lula ngemibuzo kunye nokunxibelelana.